China Nzuzo zuru oke na-ekpuchi mmiri mmiri 6ml na Matte na-emecha nke na-enye ụbọchị niile Jinfuya
Full mkpuchi hydrate Liquid concealer 6ml na Matte imecha na-enye All ụbọchị na-eyi Ogologo na-adịgide adịgide etemeete
Full Coverage Hydrate Concealer J202A Na - enye akpụkpọ gị mmụba nke hydration maka satin gwụchara nke na - anaghị acha ọkụ. Ma Ọ bụ mkpuchi dị elu, dị ogologo ma zuru oke maka ịzobe ndị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na ebe ndị na-adịghị mma.
Ihe Nke J202A
Udidi Creamy, ezigbo, Satin imecha, Full mkpuchi, Long-adịgide adịgide,Waterproof, hydrate, Enweghị ntụpọ
Adabara Ihe karịrị ndo iri abụọ nwere ike dakọtara ncha anụ ahụ niile
Ọdịnaya Net 0.203 fl oz. (6mL)
Ọrụ Zoo pores, agba ọchịchịrị n'okpuru anya. Na-acha uhie uhie ma na-agbazi agbaji adịghị mma
Anyị na-ekwe nkwa UMUAKA-AH FREE, vegan na 100% enweghị Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, na Hydroquinone.
Onye na-ekpuchi Hydrate mkpuchi zuru ezuJ202A Na - enye akpụkpọ gị mmụba nke hydration maka satin gwụchara nke na - anaghị acha ọkụ. Ma Ọ bụ mkpuchi dị elu, dị ogologo ma zuru oke maka ịzobe ndị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na ebe ndị na-adịghị mma.
Nke a na mkpuchi mkpuchi concealerbụ ihe nzuzo gị iji tinye ihu gị kachasị mma. Nsọ grail nke na-esote-larịị-izu okè concealers, a mmiri-ọgaranya, creamy usoro blends dị ka a abụọ akpụkpọ-mwube ogbo maka ihe ọ bụla anya gị obi chọrọ. Nịm ya na a ìhè ntụ ntụ ngwa maka eke, minimalist obibia, ma ọ bụ na-aga zuru-on maximalist na obi ike red egbugbere ọnụ na nwa eyeliner.
Mee ka ihu gị dịkwuo atọ. Ihe na - egbochi mmiri na ọsụsọ na - agba mmanụ iji nweta nsonaazụ na - adịte aka. Mee ka mma mara mma kwa ụbọchị, ma kuziere ụmụ nwanyị ka esi ghọrọ ụmụ agbọghọ mara mma na agụụ mmekọahụ.
1. 1.Obi ọjọọ, vegan na 100% na-enweghị Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, na Hydroquinone.
2.Na-enye gị akpụkpọ a ume nke hydration maka a satin imecha nke anaghị flake.
3.Jiri mkpanaka tinye ihe nhichapụ na ebe achọrọ ma jiri nwayọ jiri aka aka gị hichaa aka, ahịhịa ma ọ bụ ogbo.
4.A na-enweta ya na 23 dị iche iche.
Akwa-mkpuchi, ogologo yi na zuru okè n'ihi na-ezo ndị pesky tụrụ na n'okpuru-anya okirikiri.
Nke gara aga: 18 Afọ Factory Moisturizing Lipstick - Clear Lip Gloss Moisturizing Vegan Lip Care Makeup Long Piping Lip Plumper creamy Lip Oil for thin lips - Jinfuya
Osote: Full mkpuchi mmiri mmiri concealer 6ml matte imecha 16 awa ogologo na-adịgide adịgide etemeete concealer na elu mma
Ogologo oge etemeete Foundation
Full mkpuchi hydrate Liquid concealer 6ml na ...
Mmanụ flawless mmanụ-free matte Liquid ntọala Full ...
N'ogbe Silky Liquid Foundation 8 agba Weig ...
Etemeete Base Primer zuru oke maka ụdị anụ ahụ niile ...